Imigaqo ye-21 yeQhinga lokuSebenza kwezeNtlalo | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 19, 2013 NgoLwesibini, Novemba 19, 2013 Douglas Karr
Andilithandi igama elithi "imithetho" xa kuziwa kwiNtengiso yezeNtlalontle, kodwa ndiyakholelwa ukuba sinamava awoneleyo kunye nezifundo zamatyala ukuqonda apho iinkampani zenze umsebenzi omkhulu zisebenzisa imidiya yoluntu kwaye ziyivuthele ngokwenene. Le infographic yenza umsebenzi omangalisayo wokuseta ulindelo kunye nezikhokelo xa kuziwa ekuphuhliseni isicwangciso sakho seendaba zentlalo.
Njengayo yonke enye into, kukho imithetho engabhalwanga ebandakanyekayo kwintengiso yemidiya yoluntu. Wonke umntu unyanzelekile ukuba alandele le mithetho, kodwa ezo zintsha kumdlalo zinokuphosa iziseko. Nayi imithetho engabhalwanga engama-21 yentengiso yemidiya yoluntu eyilelwe ukwenza isiseko esiqinileyo salo naliphi na iphulo lokuthengisa ngemidiya yoluntu.
I-infographic yaphuhliswa ngu Iiprikhrikhi zeNtlalo Pro, Iplagi yeWordPress elandelela ii-tweets, ukuthanda, izikhonkwane, ii-1s kunye nangaphezulu kwiDashboard yakho yeWordPress!
tags: kwi-infographicimigaqo yemidiya yoluntukwimidiya yoluntuimithetho yemidiya yoluntu
Khuphela ngaphezulu kweetemplate ze-infographic ezingama-100
intengiso yemidiya yoluntu rochest
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2013 ngo-2: 50 AM
Iposti emnandi kakhulu …… .nkosi ngolu lwazi luluncedo.
IiNkonzo zeeNkonzo zengingqi
Jan 9, 2014 kwi-5: 19 AM
Eyona nto intle kakhulu yokwazi malunga "ne-infographic: Imigaqo ye-21 yeQhinga leSiseko seendaba seNtlalo", enkosi ngolwazi ..
Intengiso ye-Intanethi kwihotele
Jan 9, 2014 kwi-5: 51 AM
Ewe, imultimedia isebenza kakuhle kuba bonke abantu ehlabathini babona umhlaba uphosa enye ifilosofi elungileyo kunye noluhlu ekwabelwana ngalo ..
Jan 25, 2014 kwi-7: 21 AM
Ibhlog elungileyo, iposwe ngendlela enobuchule bokuqonda.
Mar 1, 2016 ngo-11: 54 AM
Iposi entle, ndingayiguqulela i-infographic yakho kwaye ndiyipapashe?
Ndikwingingqi enezithethi zaseSpanish kungakuhle ukuba nayo kulwimi lwethu lwenkobe.
Mar 1, 2016 ngo 12:43 PM
Kunjalo! Qiniseka ukuba unika ikhredithi kumshicileli wokuqala kunam.